को हुन फोरमबाट प्रदेश २ को प्रमुखमा नियुक्त भएका रत्नेश्वरलाल कायस्थ ? -
५ माघ २०७४, शुक्रबार १०:५७ 1866 पटक हेरिएको
काठमाडौं । सरकारले बुधबार तोकेको प्रदेश प्रमुखमध्ये २ नम्बर प्रदेश रत्नेश्वर लाल कायस्थलाई नियुक्त भएका छन्। नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत कायस्थ पछिल्लो समयमा मधेश आन्दोलनसंग जोडिएका व्यक्तित्व हुन। हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय सचिव समेत रहेका कायस्थ मधेशी बुद्धिजिवी फोरम नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन।
यस्तो छ कायस्थको संक्षिप्त जीवनीः
२००१ साल बैशाख महिनामा महोत्तरी जिल्लाको सुगा गाऊँ (हाल जलेश्वर नगरपालिका)मा माता अचकमणी देवी र पिता राजकिशोर लालको पुत्रका रुपमा जन्मिएका हुन । ३ दाजु भाई र ३ दिदि बहिनी मध्ये सबैभन्दा कान्छो रहेका कायस्थको प्रारम्भिक शिक्षा जलेश्वर स्थित ल.च.मु उच्चाङ्गल विद्यालयमा भएको हो । २०१६ सालमा उक्त विद्यालय बाट एसएलसी उतिर्ण गरेका कायस्थ आफनो व्याचको एक मात्र प्रथम श्रेणीमा उर्तिण हुने विद्यार्थी हुन ।
त्यस पछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न त्रीचन्द्र कलेज काठमाण्डूमा नामांकन गराएका कायस्थ २०१८ सालमा आइएस्ससीमा युनिभर्सिटी टप गरेका हुन । शिक्षा प्रति अतिसम्बदेनशिल कायस्थ भारत पश्चिम बंगालको खडगपुर स्थित आइआइटी कलेज बाट २०२१ सालमा बी टेक अनर्स गरेका हुन । उनि एम.एस्सी. इम्पेरियल कलेज, लण्डनबाट समेत गरेका हुन ।
वि.टेक अनर्स उतिर्ण गरे पछि सोही वर्ष अर्थात २०२१ साल फागुन महिनामा नेपाल सरकारको सेवामा इन्जिनियर पदमा बहाली भएका थिए । २०५८ साल सम्म निरन्तर सरकारी सेवा प्रदान गरेका कायस्थ नेपाल सरकारको सचिव पद बाट सेवा निवृत भएका हुन ।
सरकारी सेवामा प्रवेश पछि २०२३ सालमे भारतक समस्तीपुर निवासी सविता लाल संग बैवाहिक जीवनमा बाधिएका कायस्थको २ टा छोरी र दुई छोरा छन ।
सरकारी सेवा बाट निवृत भएपछि कायस्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड मेम्बर, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलका बोर्ड मेम्बर भई सेवा प्रदान गरि सकेका हुन ।
२०६३ साल बाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका कायस्थ तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय सचिव भई हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका समेत केन्द्रिय सचिवको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । बौद्धिक प्रतिभाक धनि कायस्थ मधेशी बुद्दिजिवी फोरम नेपालको पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष समेत हुन । उहाँ २०६४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत हुनु भएको थियो ।
सरकारी सेवा बाट निवृत भएपछि राजनीतिको माध्यमले निरन्तर मधेश र मधेशीका साथै मुलुकमा राज्यद्वारा पछि पारिएका समाज आदिवासी जनजाति सहितका लागि काम गर्दै आएका कायस्थ सरल स्वभाव र इमान्दारिताका लागि परिचिति व्यक्तित्व हुन ।
प्रधानमन्त्रीले आज नीति तथा
सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.
५७ बुँदामा कांग्रेसको लकडाउन